Equipment Ruzivo |
Teerera kune organic fetiraiza
ne admin pane 2021-07-21
Iko kukura kwekurima kwekurima kunofanirwa kutanga kugadzirisa dambudziko rekusvibiswa kwevhu. Zvinetso zvakajairika muvhu zvinosanganisira: kuumbana kwevhu, kusaenzana kweiyo mineral nutrient ratio, yakaderera organic zvinhu zvemukati, isina kudzika yekurima dura, ivhu acidification, ivhu salinization, kusvibiswa kwevhu nezvimwe. Kugadzira t ...
Ndedzipi mhando dzefetiraiza yekomboni
ne admin pane 2021-07-15
Fetereza yemubatanidzwa inoreva zviviri zvezvitatu zvinovaka muviri zve nitrogen, phosphorus, uye potasium. Iyo fetereza yemakemikari inogadzirwa nemaitiro emakemikari kana epanyama nzira uye nzira dzekusanganisa. Nitrogen, phosphorus, uye potassium zvinovaka muviri zvemukati nzira yekunyora: nitrogen (N) phosphorus (P ...
Komputa fotereza kugadzirwa maitiro
Fetereza yemubatanidzwa, inozivikanwawo semushonga wemushonga, inoreva fetiraiza ine maviri kana matatu manyowa ezvirimwa zvinovaka nitrogen, phosphorus uye potasium inogadzirwa nemakemikari maitiro kana nzira yekusanganisa; fetiraiza yemubatanidzwa inogona kuva hupfu kana gobvu. Pombi yemubatanidzwa ...
Pedzisa zvigadzirwa zvekugadzira zve organic fetiraiza
Iyo yakazara seti ye organic fetiraiza yekugadzira michina kazhinji inosanganisira: yekuvirisa michina, kusanganisa michina, kupwanya michina, granulation michina, kuomesa michina, kutonhora midziyo, fetiraiza yekuongorora michina, yekupakata michina, nezvimwe.
Nguruve mupfudze organic fetiraiza yakakwana midziyo
Sarudzo yezvinhu zvakasvibirira zvenguruve mupfudze uye organic-fotereza inogona kuve yakasiyanasiyana mupfudze uye marara ehupenyu. Iyo yekutanga fomula yekugadzira inosiyana zvichienderana nerudzi uye mbishi zvinhu. Iyo yakazara seti yenguruve mupfudze organic fetiraiza michina inowanzo sanganisira ...
Organic fetiraiza yekugadzira mutsara michina
ne admin pane 2021-06-29
Sarudzo yezvinhu zvakasvibirira zve organic fetiraiza uye bio-organic fetiraiza inogona kuve dzakasiyana zvipfuyo mupfudze uye zvakasikwa marara. Iyo yekutanga fomula yekugadzira inosiyana zvichienderana nerudzi uye mbishi zvinhu.
Organic fetiraiza kugadzirwa maitiro
Sarudzo yezvinhu zvakasvibirira zve organic fetiraiza uye bio-organic fetiraiza inogona kuve dzakasiyana zvipfuyo mupfudze uye zvakasikwa marara. Iyo yekutanga fomula yekugadzira inosiyana zvichienderana nerudzi uye mbishi zvinhu. Iwo akakosha mbishi zvinhu ndeaya: huku manyowa, dhadha mupfudze, hanzi mupfudze, yenguruve mupfudze, catt ...
Fermentation tekinoroji yehuku manyowa ehupenyu fetiraiza
ne admin pane 2021-05-25
Kune mamwe zvakare uye akakura uye madiki mapurazi. Paunenge uchisangana nevanhu nyama nyama, ivo vanogadzira yakawanda huwandu hwezvipfuyo nehuku yehuku. Kurapa kwakaringana kwemanyowa hakugone chete kugadzirisa dambudziko rekusvibisa kwezvakatipoteredza, asi zvakare shandura marara. Weibao inogadzira ...
Makwai manyowa manyowa fetiraiza chinovira michina
ne admin pane 2021-05-18
Kugadzira chirongwa che organic fetiraiza
Iwo aripo ezvokutengeserana mapurojekiti e organic fetiraiza haangori chete mukuenderana nehupfumi hupfumi, asiwo zvinoenderana nekutungamira kwenzvimbo uye zvakasvibirira zvekurima marongero. Zvikonzero zveiyo organic fetiraiza yekugadzira chirongwa Iyo sosi yekurima kusvibiswa kwezvakatipoteredza: iyo ...
Kuvira Tekinoroji YeCow Manyowa Organic Fertilizer